Shuceyb Hassan: Profil in Comunitatea Just Landed
Waa marwalba iska dhaca inta badan in marka Imtixaan lagaaro u yimaado walwal ku yimaada ardayga arrinkaas oo sababi kara in u diyaar garowga Imtixaanka uu hoos u dhaco. Waxyaabaha walwalkaan keena waxaa ugu horeeya ama ugu wayn liidashada hab
Imtixaanka ugu adag ee dadka kala saaraa waa waayaha wakhtigu wato iyo duruufaha nolosha ee is bed bedelka badan.
Sida ugu habboon ee ardaygu ugu diyaar garooobi karo waa inii si fiican u akhriyo duruusta la siiyo. Hadaba waqti si naftaada oo akhri casharrada, iskuna day fahamto waxa aad akhrinayso ha isku deyin inaad xifdiso.
Ardayda qaar maalinta ugu dambeysa ayay casharrada dhan wada akhriyaan laakiin sida ugu wanaagsan waa inui ardaygu maalin xooga yar akhriyo todobaadyada ka horreeya imtixaanku soo dhowyahay.
Ku dedaal goobta aad imtixaanka ku diyaarinayso ee aad wax ku akhrisanayso meel habaysan oo degan. Iska ilaali waxyaabaha ku mashquuli kara sida taleefanka gacanta iyo aaladaha kale ee qadka laga galo.